15 ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုမရွေးချယ်ခင်သူတို့၏ API အကြောင်းသင်မေးသင့်သောမေးခွန်းများ Martech Zone
သူငယ်ချင်းကောင်းတစ် ဦး နှင့်လမ်းညွှန်ဆရာတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်အားမေးခွန်းတစ်ခုမေးခဲ့သည်။ ဤအဖြေအတွက်ကျွန်ုပ်၏တုံ့ပြန်မှုကိုအသုံးပြုလိုပါသည်။ သူ၏မေးခွန်းများသည်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခု (အီးမေးလ်) ကို ပို၍ အာရုံစိုက်ထားသဖြင့် APIs အားလုံးအပေါ်ကျွန်ုပ်၏တုံ့ပြန်မှုကိုယေဘူယျအားဖြင့်ပြောနိုင်ပါပြီ။ ရွေးချယ်မှုမပြုမီကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သူတို့၏ API အကြောင်းရောင်းချသူအားမည်သည့်မေးခွန်းများမေးသင့်သည်ကိုသူမေးခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့် API များလိုအပ်သနည်း။
An application programming interface (API) သည်အခြားကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များမှ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်တောင်းဆိုမှုများကိုခွင့်ပြုရန်နှင့် / သို့မဟုတ်၎င်းတို့အကြားဒေတာများဖလှယ်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုရန်ကွန်ပျူတာစနစ်၊ စာကြည့်တိုက်သို့မဟုတ်အပလီကေးရှင်းကထောက်ပံ့ပေးသောမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။
၀ က်ဘ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ပြန်လည် URL တစ်ခုသင်ရိုက်ထည့်လိုက်သည့်နည်းတူ၊ API သည်သင်၏စနစ်များကိုတောင်းဆိုနိုင်ပြီး၎င်းတို့အကြားရှိအချက်အလက်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုရသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများသည်ဒီဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားနေသည်နှင့်အမျှ APIs များမှတဆင့်အလုပ်များကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်နှင့်လူ့အမှားကိုလျှော့ချရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး application များတွင် API များသည်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အဓိကကျသည်။ ပြည့်စုံသောရောင်းချသူတစ် ဦး အတွက်စျေးဝယ်သည့်အခါစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် API ကို ဖွံ့ဖြိုးရေးအရင်းအမြစ်များနှင့်အသုံးစရိတ်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ (CMO) သည်လျှောက်လွှာတစ်ခုဝယ်ယူခြင်းကိုမောင်းနှင်နိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည်ထည့်ဝင်မှုများစွာမရရှိပါ။
API မှတဆင့်ပလက်ဖောင်း၏ပေါင်းစည်းမှုစွမ်းရည်ကိုလေ့လာရန်မှာရိုးရိုးမေးခွန်းထက်ပိုပါသည်။ API ရှိလား။
အထောက်အပံ့ညံ့ဖျင်းသောသို့မဟုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် API ပါသော application တစ်ခုဖြင့်သင်ဆိုင်းအင်လုပ်ပါကသင်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကိုရူးသွပ်စေလိမ့်မည်။ သင်၏ပေါင်းစည်းမှုများသည်တိုတောင်းလာလိမ့်မည်သို့မဟုတ်လုံးဝကျရှုံးလိမ့်မည်။ သင့်တော်သောရောင်းချသူကိုရှာပါ။ သင်၏ပေါင်းစည်းမှုသည်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သူတို့၏ API စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနမေးခွန်းများ
ကွာခြားချက် - Application Programming Interface မှတစ်ဆင့်၎င်းတို့၏ User Interface ၏မည်သည့်အသွင်အပြင်ကိုရရှိမည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ UI တွင်မရှိသောအပြန်အလှန်အားဖြင့် API တွင်မည်သည့်အင်္ဂါရပ်များရှိသနည်း။
စကေး - ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမည်မျှရှိသည်ကိုမေးပါ API ကို နေ့စဉ်။ ၎င်းတို့တွင်သီးသန့်ဆာဗာများရှိပါသလား။ Quantity သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင် API သည်ကုမ္ပဏီ၏မဟာဗျူဟာ၏နောက်ကွယ်မှသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မှတ်တမ်း - API စာရွက်စာတမ်းများတောင်းခံပါ။ ၎င်းသည်ကြံ့ခိုင်မှုရှိသင့်ပြီး API ရှိရရှိနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် variable အားလုံးကိုဖော်ပြသင့်သည်။
အဝန်း - အခြား developer များနှင့် code နှင့်အတွေးအခေါ်များမျှဝေရန်၎င်းတို့တွင်အွန်လိုင်း Developer Community ရှိမရှိရှိမရှိမေးမြန်းပါ။ Developer Communities သည်သင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပေါင်းစည်းမှုအားထုတ်မှုများကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာစတင်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတွင်ရှိသော 'API Guy' ကိုအသုံးချမည့်အစား၊ သူတို့၏ဖြေရှင်းချက်ကိုပေါင်းစပ်ထားသည့်စမ်းသပ်မှုများနှင့်အမှားအယွင်းများရှိခဲ့သည့်သူတို့၏ဖောက်သည်များအားလုံးကိုလည်းသင်အားသုံးသည်။
ဆပ်ပြာ vs REST - ဘယ်လိုအမျိုးအစားမျိုးကိုမေးပါ API ကို များသောအားဖြင့် REST APIs နှင့် Web Service (SOAP) APIs များရှိသည်။ သူတို့ကနှစ် ဦး စလုံးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုခုကိုပေါင်းစပ်ခြင်းတွင်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ကျိန်ခြင်းများရှိသည်။ သင်၏ပေါင်းစည်းမှုအရင်းအမြစ်များ (IT) စွမ်းရည်များကိုသင်အကျွမ်းတဝင်ရှိသင့်သည်။
ဘာသာစကားများ - မည်သည့်ပလက်ဖောင်းများနှင့်အပလီကေးရှင်းများကိုသူတို့အောင်မြင်စွာပေါင်းစည်းပြီးပြီလဲဆိုတာမေးပါ။ ဆက်သွယ်ရန်အတွက်ဘယ်လောက်ခက်ခဲကြောင်းနှင့် API အလုပ်လုပ်ပုံကိုထိုဖောက်သည်များထံမှသိရှိနိုင်ရန်။
ကန့်သတ် - ရောင်းချသူသည်တစ်နာရီ၊ တစ်ရက်၊ တစ်ပတ်လျှင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအရေအတွက်မည်မျှကန့်သတ်ချက်များကိုမေးမြန်းပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အရွယ်အစားကြီးမားသည့်ရောင်းချသူနှင့်မတူပါကသင်၏တိုးတက်မှုသည်ဝယ်ယူသူမှကန့်သတ်ထားမည်။
နမူနာ - အလွယ်တကူစတင်နိုင်ရန် code ဥပမာစာကြည့်တိုက်တစ်ခုကိုသူတို့ကမ်းလှမ်းပါသလား။ ကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာသည်သင်၏ပေါင်းစည်းမှုအချိန်ကိုအရှိန်မြှင့်မည့်ဘာသာစကားများနှင့်မူဘောင်များအတွက် SDK (Software Development Kits) ကိုထုတ်ဝေသည်။
sandbox - သင့်ကုဒ်ကိုစမ်းသပ်ရန်သူတို့သည်ထုတ်လုပ်မှုမဟုတ်သောအဆုံးမှတ်သို့မဟုတ်သဲအိတ်များပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးသလား။
အရင်းအမြစ်များ - သူတို့ကုမ္ပဏီအတွင်းပေါင်းစည်းမှုအရင်းအမြစ်များကိုအပ်နှံထားရှိမရှိမေးပါ။ ၎င်းတို့တွင်ပေါင်းစည်းမှုအတွက်ပြည်တွင်းရေးအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ရှိပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်စာချုပ်၌နာရီအနည်းငယ်ချန်ထားပါ။
လုံခွုံရေး - API ကိုသုံးပြီးသူတို့ဘယ်လိုစစ်မှန်သလဲ။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူအထောက်အထားများ၊ သော့များသို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းများလား။ သူတို့သည် IP address ဖြင့်တောင်းဆိုမှုများကိုကန့်သတ်ထားနိုင်ပါသလား။
ပွင့်နေချိန် - သူတို့ဘာတွေမေးလဲ API ကို uptime နှင့်အမှားနှုန်းသည်နှင့်သူတို့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနာရီများမှာအခါ။ ထို့အပြင်၎င်းတို့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လုပ်ကိုင်ရန်နည်းဗျူဟာများသည်အရေးကြီးသည်။ ၄ င်းတို့တွင်ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန်အတွင်းပိုင်းဖြစ်စဉ်များရှိပါသလား API ကို အခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုကြောင့်မှတ်တမ်းမရရှိနိုင်သည့်အချိန်တွင်ဖုန်းခေါ်ဆိုပါစို့။ ဒီဟာကသူတို့ဖြေရှင်းနည်းအတွက်သူတို့တီထွင်ခဲ့တာလား။
SLA - သူတို့တစ်တွေရှိလား ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်သဘောတူညီချက် အချိန်ပိုကို ၉၉.၉% အထက်သို့ရောက်သင့်ပါသလား။
လမ်းပြမြေပုံ - သူတို့ API တွင်မည်သည့်အနာဂတ်အင်္ဂါရပ်များပါဝင်ပြီးမျှော်လင့်ထားသည့်ပေးပို့မည့်အချိန်ဇယားများရှိပါသလဲ။
Integrated - မည်သည့်ထုတ်ကုန်များကိုပေါင်းစပ်။ သူတို့တီထွင်ခဲ့သနည်း။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကုမ္ပဏီများသည်အခြားထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သောအခါ၎င်းသည်အင်္ဂါရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အတွင်းပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုကိုငြင်းပယ်နိုင်သည်။
ဤမေးခွန်းများ၏အဓိကသော့ချက်မှာပေါင်းစည်းခြင်းကသင့်အားစင်မြင့်ပေါ်သို့လက်ထပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်တစ်ယောက်ယောက်နဲ့လက်မထပ်လိုချင်ဘူး၊ သူတို့အကြောင်းကိုတတ်နိုင်သလောက်သိအောင်မလုပ်ချင်ဘူးလား။ ရှေးရှေးသူတို့၏ပေါင်းစည်းမှုစွမ်းရည်ကိုမသိဘဲပလက်ဖောင်းကိုဝယ်သောအခါဤသည်မှာဖြစ်ပျက်လာသည်။
API အပြင်အခြားမည်သည့်ပေါင်းစည်းမှုအရင်းအမြစ်များလည်းရှိနိုင်သည်ကိုရှာဖွေသင့်သည်။ Barcoding, mapping, data cleansing services, RSS, Web Forms, Widgets, formal Partner Integrations, Scripting Engines, SFTP drop, စသဖြင့်
Tags: apiapi စာရွက်စာတမ်းများapi အကဲဖြတ်api အင်္ဂါရပ်များapi မေးခွန်းများapi သုတေသနလျှောက်လွှာပရိုဂရမ်းမင်း interface ကိုအင်္ဂါရပ်များအနားယူsandbox 'SDKဝန်ဆောင်မှုအဆင့်သဘောတူညီချက်
မတ်လ 29, 2021 မှာ 11: 44 AM
အမြဲတမ်း Doug ကဲ့သို့သောဂရိတ်အကြောင်းအရာ!
မတ်လ 29, 2021 မှာ 11: 47 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Jon! ကြင်နာတဲ့မှတ်စုတစ်ခုထားဖို့အချိန်ယူပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကိုအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပါ။